Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka fiidiyo ugu Computer la USB / Fireware
> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka fiidiyo ugu Computer
Fiidiyo ma qabsatay ma aha oo kaliya videos, laakiin daqiiqado ku faraxsan iyo xusuus qiimo muddo nolosha. Si aad u samayso faa'iidada ugu badan ee aad video, waa in la wareejiyo computer ah . Habka ugu fudud ee ay u gudbiyaan videos in PC waa adigoo isticmaalaya cable USB ama Firewire. Ka dib markii lagu sameeyo, la software saxda video tafatirka, aad xaalkaa kartaa videos on computer sida xirfadle ah, ama uun u daawado TV qoyska iyo saaxiibada.
Connect fiidiyo ugu Computer
Waxa aad u baahan doontaa in aad ku xidhi aad fiidiyo ugu computer ah:
Cable USB ama cable Firewire (IEEE 1394 cable)
Anfaco AC bixisey
Sidee in ay ku xidhmaan fiidiyo ugu Computer:
Talaabada 1: Isku AC Adopter in ay fiidiyo aad ee-Jack oo warbaahinta derbiga (bareesada darbiga), oo shid fiidiyo ah.
Talaabada 2: Isku Jack USB / Firewire aad fiidiyo in kombiyuutarka la isticmaalayo cable USB / Firewire bixisey.
Talaabada 3: Hadda aad fiidiyo si toos ah ogaan doona oo ka soo muuqan doona sida disk drive adag ee computer (sida caadiga ah Tilmaam pop-up ee koonaha midig). Haddii aad fiidiyo ma aqoonsan computer, rakibi darawalka isticmaalaya bixisey CD-ROM.
Video ka fiidiyo ugu Computer Bedelka
Ka dib markii fiidiyo ah ayaa ku xiran si aad u computer, idinkaga dhigi karin ka fiidiyo wareejiyo videos in computer si sahlan, sida faylasha dayanayaan mid kale ka on drive disk. Waxa kale oo aad ku rakibi karo oo ay maamulaan software ka bixiyo sida Picture Motion Browser u Sony fiidiyo iyo PixelaMixer u fiidiyo Canon inay soo dejinta iyo edit video ka fiidiyo.
Transfer videos fiidiyo isticmaalaya Reader Card:
Haddii aad aad u fiidiyo ugu record video in Flash Memory sida Memory ul ama SD Card, waxaad u baahan tahay akhristaha Card ah si ay u gudbiyaan video ka xasuusta flash si aad u computer. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah akhristayaasha card in la jaanqaadaan labada Memory ul iyo kaarka SD, oo sida caadiga ah ay Jack USB ah, si aad u kala iibsiga fudud karaa duubay fiidiyowga si ay computer sida ka hawlgala files disk deegaanka ka dib markii ay ku xirmaan Jack USB dekedda USB ku on your computer .
Talooyinka wareejinta fiidiyo videos
1. Video beddelashada ka fiidiyo ah in ay PC ka qaadan kartaa ilaa badan oo boos drive adag. Haddii aad leedahay flash drive dibadda, ama waxa la habboon in la gubi fiidiyo video inay DVD, waxaad qalabka dibadda wareejiyo yaabaa videos si loo badbaadiyo meel drive adag.
2. Waxaa isticmaali doonaa badan oo khayraadka nidaamka halka wareejinta video ka fiidiyo ah. Sidaa darteed, aad jeclaan barnaamijyo kale oo ka wanaagsan dhow socda ka hor inta videos kala iibsiga si aad u computer.
3. Xigato buugii saaraha aad fiidiyo si ay u arkaan nooca xiriir aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan fiidiyo video.
4. Fiidiyo DVD ayaa si toos ah u qori waayay videos in DVD u ciyaaro ciyaaryahanka Blu-ray ama DVD joogto ah. Si aad u wareejin DVD videos duubay fiidiyo ugu computer, Wondershare Video Converter kaa caawin kara inaad badalo videos fiidiyo ka soo DVD disc.
Qaabab video diiwaan by fiidiyo kala duwan yihiin inta badan ku xiran tahay saarayaasha kala duwan sida Sony, Canon, Panasonic. The videos qeexidda SD caadiga ah waxay leeyihiin AVI, MOV, Mpg, MP4, mod, iwm file kordhiyo, halka qeexidda HD videos TOD, MTS, M2TS iyo wixii la mid ah. Badan oo tafatir software video on suuqa caawin kara edit wareejiyo videos fiidiyo ku computer, kuwa xirfadda sida Sony Vegas iyo Adobe Ciyaar ka mid aasaasiga ah sida Video Editor .
Guud ahaan, ma waxaad u tagi kartaa SD video HD video galay. Laakiin aad u bedeli karaan HD video in SD videos for size yar oo waafaqsan qalabka la qaadi karo ee software tafatirka, kuwaas oo ama la isticmaalayo video Converter . Waxa lagugula talinayaa inaad si loogu badalo video in FLV u soo bandhiga online, sida Youtube iyo Facebook.
Haddii daawashada fiidiyo video on TV ujeedada kama dambaysta ah, waxaad u baahan tahay inaad nuqul ka videos fiidiyo gal DVD adiga oo isticmaaleya isticmaale la doonayo Video inay software DVD gubi .